China 4-Methylpropiophenone CAS: mpanamboatra sy mpamatsy 5337-93-9 | Dumi
Manome toky izahay fa handalo 100% amin'ny alàlan'ny US, UK, Australia, Netherlands, Canada, France, Germany, Spain, Belzika, Sweden, Poland, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Czech Republic, Slovakia, Portugal, ny fonosanao.
Tongasoa eto Shanghai Dumi Biotechnology Co., LTD. Dumi dia orinasa mpanelanelana amin'ny alàlan'ny fanafody mpanelanelana haingana any Shanghai.
Dumi ny foibem-pikarohana sy ny fampandrosoana dia manome serivisy synthesis manokana.
Shanghai Dumi Biotechnology Co., LTD dia afaka manome simika simika namboarina amin'ny habetsaky ny laboratoara, ozinina ary ny ambaratonga indostrialy.
Afaka manolotra vidiny mifaninana amin'ny mpanjifa tsirairay izahay ary miantoka ny kalitaon'ny vokatray.
Manaraka ny filan'ny mpanjifa tsirairay izahay ary manangana fifandraisana tsara amin'izy ireo.
Raha manana fanontaniana hafa ho ahy ianao. Aza misalasala mifandray aminay.
Shanghai Dumi Biotechnology Co., ny kalitaon'ny vokatra LTD dia mitarika any Shina. Mandritra izany fotoana izany, eo ambanin'ny ezaky ny mpiasan'ny orinasa rehetra, nahavita fampandrosoana haingana ny orinasa. Ny kalitaon'ny vokatray dia marin-toerana sy azo itokisana, ary nanangana fifandraisana ara-barotra sariaka sy marin-toerana amin'ireo orinasa fanta-daza ao an-trano sy any ivelany isika. Ny vondrona misy ahy dia mahatakatra ny hevitra tsara momba ny fitantanana finoana, manaraka ny fiantohana kalitao, ny tanjon'ny mpampiasa voalohany dia manome ny kalitao miavaka, ny vokatra azo antoka ho an'ny mpanjifa, dia nahazo ny fankatoavana tsy tapaka an'ny mpanjifa ankapobeny ary ny fankasitrahana miaraka amin'ny fahombiazan'ny fahombiazana avo lenta serivisy fivarotana. Manantena ny hiara-hiasa amin'ireo namanay sy sakaizanay avy amin'ny sehatra rehetra izahay hamoronana ho avy vaovao.
Teo aloha: CAS 37148-48-4 4-Amino-3, 5-Dichloroacetophenone Kalitao avo lenta
Manaraka: 62-44-2, Phenacetin
L-Proline CAS 147-85-3 Famatsiana orinasa
526-83-0, L - (+) - asidra tartarika